Outlaw country - ဝီကီပီးဒီးယား
Outlaw country သည် အမေရိကန် country ဂီတ၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ အတောအတွင်းနှင့် ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် outlaw movement (သို့) outlaw ဂီတဟုလည်း ရည်ညွန်းသည်။ ဂီတသည် အစောပိုင်းမျိုးခွဲများဖြစ်သော Honky tonk နှင့် rockabilly ကဲ့သို့ rock နှင့် folk rhythms ကို ရောနှောထားသည်။ country တီးခတ်ပုံနှင့် စာသားများကို ဆန်းစစ်ထားသည်။ ရွေ့လျားမှုသည် မျက်စိကျလောက်သော ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကျော်ကြားသောတည်ဆောက်ပုံနှင့် Nashville sound ကဲ့သို့ စီးပွားရေးအရတုံပြန်ချက်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ အစောပို်င်း “outlaw” တွင် Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Johnny Cash, Merle Haggard, Fifth Highwayman, Guy Clark, Jerry Jeff Walker, Jessi Colter, Tortpall Glaser, David Allan Coe, Sammi Smith နှင့် Tanya Tucker တို့ပါဝင်သည်။ အခြားဆက်နွယ်နေသောအနုပညာရှင်များထဲတွင် Hank Williams Jr, the Eli Radish Burd, Leon Russell, Townes Van Zandt, Michael Martin, Morphey, Billy Joe Shaver, Steve Earle, Joe Ely, Johnny Paychecks, Lee Brice, Ed Bruceနှင့် Gary Steward တို့လည်းပါဝင်သည်။
Outlaw sound သည် honky tonk ဂီတမှ (၁၉၄၀နှင့် ၁၉၅၀)၊ rockabilly (၁၉၅၀)မှ အမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီး rock and rollမှ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အစောပို်င်း outlaw သည် Hank Williams, Elvis Presley နှင့် Baddy Holly တို့မှ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Waylon Jennings နှင့် Willie Nelson တို့သည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Nashville sound ကို ကူးပြောင်း၍ စတင်တိမ်းညွတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀သည် ဆယ်စုနှစ်၏ကြီးမားစွာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ဂီတကို ရောင်ပြန် ဟပ်ခဲ့သည်။ The Beatles, Bob Dylan, the Rolling Stones နှင့် များစွာသော သူတို့သည် အနုပညာရှင်များမှတ်တမ်းတင်ရာ ရိုးရာအခန်းနိုးကြားလာခဲ့သည်။ သူတို့သည် ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအကြောင်းများကို ရေးသားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် လူအချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေးကို လိုက်ဖက်ညီစေရာမှ ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် country ဂီတသည် ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ Nashville သည် mainstream country ဂီတကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Lubback နှင့် Austin တို့သည် outlaw country အတွက်ဖန်တီးမှုဗဟိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ southern rock သည် outlaw country ရွေ့လျားမှုတွင် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ သီချင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ပုံစံသည် Muscle Shoals, Alabama တွင် ဗဟိုကျလာခဲ့သည်။
မူရင်း outlaw label အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ Jason Mellard အဆိုအရ Progressive Country: How the 1970s Transoformed the Texan in Popular Culture ၏စာရေးဆရာက အမျိုးသားရေးအသိစိတ်မှ ပေါက်ကွဲခြင်းထက်အနှစ်သာရပိုသည်။ ထိုဝေါဟာရကို Ladies Love Outlaws စတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Lee Claytonနှင့် Waylon Jennings တို့၏ ၁၉၇၂ခုနှစ်၏ album of the same name မှသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဝေဖန်ရေးဆရာ Dave Hickey က ၁၉၇၄ country Music မဂ္ဂဇင်းတွင် Nashbille ဂီတစက်မှုမှတ်တမ်းကို ဆန့်ကျင်သော အနုပညာရှင်များကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၇၆တွင် outlaw ရွေ့လျားမှုသည် Waylon Jennings, Willie Nelson, Jessi Colter နှင့် Tompal Glaser တို့သီချင်းများပေါင်းစည်းထားသော Wanted! The Outlaws ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ သိပ်သည်းခိုင်မာလာစေခဲ့သည်။ တစ်သန်းရောင်းချနိုင်မှုနှင့်အတူ platinum ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိသော ပထမဆုံး country album ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Southern rock လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်သကဲ့သို့ country အနုပညာရှင်များသည် ဤဂီတထဲတွင် rock ကိုပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ သီချင်းရေးဆရာဂီတာသမားများဖြစ်သော Willie Nelson, Waylon Jennings နှင့် Hank Williams, Jr.Nashville sound ပုံသေနည်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လွတ်လပ်မှု ပြင်းထန်စွာဖြင့် Outlawsသည် လန်းဆန်းသော တီးကွက်များကို စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ country core ထဲသို့ rockပုံစံများကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ Jennings နှင့် Nelson တို့ကို stereotypical outlaws ဟုမှတ်ယူကြသော်လည်း ကွဲပြားသော စာရေးဆရာနှင့် ဖျော်ဖြေသူများ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် outlaw ဝိညဉ်နှင့်အတူ အစိတ်အပိုင်းများကို လှုပ်ရှားမှုသို့ ရောနှောခဲ့သည်။ Jennings နှင့် Nelson များသည် Nashville စစ်သည်တော်များဖြစ်ပြီး သူတို့သည် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အသက်မွေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ texas ဒေသမှ Nashville ထုတ်လုပ်သူအထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ Jennings သည် သူ၏မှတ်တမ်း company မှ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်album ကို သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၃တွင် သူ၏ Lonesome, On’ry and Mean ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သီချင်းရေးဆရာနှင့်ဖျော်ဖြေသူ Steve Young က ရေးသားပေးခဲ့သည်။ သူသည် outlaw style ကိုဖန်တီးရန် ကူညီခဲ့သည်။ Steve Young ကဲ့သို့ Billy Joe shaver သည် ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် Old Five and Dimers Like Me” album ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး outlaw အမျိုးအစားမှ country classic အမျိုးအစားဟုယူဆကြသည်။ Nelson သည် ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းတွင် ထိပ်ဆုံး Nashville သီချင်းရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သီချင်းရေးဆရာအနေဖြင့် သူသည်အဓိက pop-crossover အများစုရေးသားခဲ့သည်။ Patsy Cline အတွက် Crazy နှင့် Faron Young အတွက် Hello Walls တို့ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုတော်အနေဖြင့် သူသည် မည်သည့်နေရာမှ မရောက်ခဲ့ပေ။ သူသည် ၁၉၅၁တွင် Nashville စွန့်ခွာပြီး Texas သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ဂီတပညာရှင်များသည် သူနှင့် Austin တွင်တွေ့ဆုံပြီး country ဂီတအပေါ်လွှမ်းမိုးသည့် folk နှင့် rock တို့ကို ဖွံဖြိုးစေခဲ့သည်။ outlaw အမျိုးအစားသို့ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေမှုနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Jerry Jeff Walker, Michael Martin Murphey နှင့် Billy Joe Shaver တို့သည် သူ၏ဘဝအနာဂတ်ကို ပုံဖော်စေခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် Nelson သည် သူ့ကိုယ်သူ တီထွင်ဆန်းသစ်ခဲ့သည်။ အခြားအရေးပါသော လွှမ်းမိုးမှုမှာရေးသားခြင်းနှင့် တီးခတ်ခြင်းများကို Austin တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Butch Hancock, Joe Ely နှင့် Jimmie Dale Gilmore တို့သည် The Flatlanders တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး album အမြောက်အမြားဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူသုံးဦးသည် outlaw အမျိုးအစား၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အပေါ်အရေးပါသော ဖြန့်ချိမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ The Lost Gonzon Band, Jerry Jeff Walker နှင့် Michael Murphey တို့နှင့် သူတို့၏အလုပ်ကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ပြည့်ဝစုံလင်သော outlaw country ကို မွေးဖွားစေခဲ့သည်။ Townes Van Zandt, Steve Earleနှင့် Guy Clark တို့သည် သူတို့၏သီချင်းများနှင့် ဘဝနေထိုင်မှုမှ ဖြတ်သန်းလျက် outlaw ethos ကို ဖွံဖြိုးစေခဲ့သည်။ Johnny Cash သည် သူ၏ အချိန်အများစုကို Arkansas နှင့် Tennessee တွင် သုံးချခဲ့သော် လည်း သူသည် outlaw ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ သူ၏ဘဝရှင်သန်ခြင်းမှ အတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် At Folsom Prison နှင့် At Sun Quentin album များကို ထောင်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Cash သည် Nelson, Jennings နှင့် Kris Krisfofferson နှင့်အတူ အဆက်အသွယ်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ကွဲပြားသော folk counterculture figures နှင့်အတူ စကားအသုံးအနှုန်းကို ကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။ အချက်အလက်များသည် Nashvilleနှင့် television အခွင့်အာဏာများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ တွင် Outlaw ရွေ့လျားမှုသည် Wanted! The Outlaws ၏ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ မိုင်တိုင်အသစ်တစ်ခုအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Waylon Jennings, Willie Nelson, Jessi Colter, နှင့် Tompall Glaser တို့ featuring သီဆိုထားသည်။ Wanted! The Outlaws သည် ပထမဆုံး country album ဖြစ်လာပြီး platinum ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Outlaw_country&oldid=396466" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၀၆:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။